E wepụtara ọhụụ nke Krita 4.1.0 onye ndezi ihe oyiyi | Site na Linux
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke nchịkọta ihe oyiyi Krita 4.1.0
Ya E mere ka ọ dị ọhụrụ niile nke ngwa ihe ndozi ihe oyiyi a ma ama. Site na nkwupụta ndị otu na-ahụ maka mmepe nke Krita kwupụtara nnweta nke ọhụrụ Krita 4.1.0 mbipute.
Maka ndị na-amaghị ngwa ọrụ a, enwere m ike ịgwa gị nke ahụ Krita bu onye editọ onyonyo ama ama emere dika ihe osise dijital na ihe osise.l, Krita bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ kesara n'okpuru ikike GNU GPL, ọ dabere na ọba akwụkwọ KDE ma tinye ya na Calligra Suite.
Ngwa interface bụ nnọọ kensinammuo na na mgbakwunye na nke ndị maara Photoshop na nke a ga-abụ nnọọ maara.
nzu Ọ na-enye anyị ohere ijikwa faịlụ PSD, ọ nwekwara ndakọrịta na OCIO na OpenEXR, ị nwere ike ịgbanwe echiche iji nyochaa onyonyo HDR na mgbakwunye na nke a ọ na-enye anyị ohere njikwa agba zuru oke site na LCMS maka ICC na OpenColor IO maka EXR.
Krita 4.1.0 nabatara usoro ndị a RAW: mmiri, bmq, cr2, cs1, dc2, dcr, dng, erf, fff, hdr, mdc, mos, mrw, nef, orf, pxn, raf, raw, rdc, sr2, srf, x3f, 3fr, sinima, ma ọ bụ, kc2, mef, nrw, qtk, sti, rwl, srw.
1 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Krita 4.1.0
2 Krita ngwaọrụ ndozi
3 Budata Krita 4.1.0
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Krita 4.1.0
Ọhụrụ a nkeji nkeji nke Krita Ihe onyonyo e weghachila, ọ na-eme nke a n'ụdị ngwá ọrụ ọhụrụ nke na-anọchi ihe osise ochie ochie docker.
Ugbu a ọ ghọrọ akụkụ nke ngwaọrụ Krita. Enwere ike ịchọta nke a na akara ngosi akara na otu otu dị ka ọkachamara na ngwaọrụ ndị na-achị achị. Na ngwaọrụ a, ị nwere ike
Tinye otutu onyonyo n’otu oge
Bugharịa otu ma ọ bụ karịa ihe oyiyi gburugburu ma ọ bụ pụọ na kwaaji
Ọnụ ọgụgụ wee bugharia ihe oyiyi ọ bụla
Jikwaa opacity na saturation nke ihe oyiyi ọ bụla.
Tinye ma ọ bụ jikọọ onyogho onyonyo na faịlụ KRA gị.
You nwere ike ịlele vidiyo na-esonụ ebe ị nwere ike ịmatakwu uru nke ngwá ọrụ a.
Ọzọkwa ọzọ animation etiti management nhọrọ kwukwara, n'etiti nke anyị nwere ike ịchọta: megharia okpokolo agba, tinye okpokolo agba, detuo okpokolo agba ma hazie oge playback. Omume ọhụrụ a niile ka enwere ike ịnye ụzọ mkpirisi.
Krita ngwaọrụ ndozi
Ngwaọrụ ọzọ nke ritere uru na mmelite ọhụrụ a bụ usoro iheomume, ngwá ọrụ a ka mma ka mma na-ekwurịta okwu otú oge a otu etiti na-agba ọsọ, na mgbe a etiti bụ efu ma ọ bụ.
Nnukwu mmelite ọzọ ị nwere ike ịchọta na Krita 4.1.0 bụ arụmọrụ ka mma na mmemme.
Nke a na-enweta ekele eziokwu na na Krita nhazi anyị nwere ike melite animation cache arụmọrụ iji "mpaghara nke mmasị".
Site na ime ka nhọrọ a, Krita ga-agbakọ mpaghara ndị gbanwere n'ime mpaghara elere anya karịa akwa ahụ niile. Ga-achọ ma "Jiri mpaghara mmasi" yana "Kwụsị oghere eserese" enyere na ntọala ntọala ka ọ rụọ ọrụ.
n'etiti mgbanwe ndị ọzọ anyị nwere ike ịchọta na nsụgharị a bụ:
Nwere ike ịchekwa ma buo oge: usoro ihe onyonyo na echiche dị n'ime onyonyo ị na-arụ ọrụ
Nwere ike ịmepụta multi-nyochaa wọkspeesi layout
Ihe arụmọrụ dị mma maka ịrụ ọrụ na okpokolo agba
Krita nwere ike ijikwa eserese ka ukwuu site na ịtọfe okpokolo agba na disk
Onye na-atụtụ agba ugbu a nwere nhọrọ ngwakọta
Ọkachamara na-apụ n'anya - ndị ọkachamara nwere ike iji agba agba
Enwere ike iji Python 2 wue kọlụm edemede Krita
Ihe sokwa ya bụ akụkụ mbụ nke Ivan Yossi's Google Summer nke Koodu iji melite arụmọrụ nke ihe nkpuchi ahịhịa site na vectorization!
Budata Krita 4.1.0
N'ikpeazụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ inweta ụdị Krita ọhụrụ a Nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ngwa ebe ị nwere ike ịnweta onye nrụnye maka ya. Maka ndị anyị bụ ndị ọrụ Linux, a na-ekesa ngwa ahụ iji AppImage.
Kedu nke anyị ga - ebudata ma nye ikikere igbu ya na:
Ma mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịgba ọsọ faịlụ a site na ịpị ya abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke nchịkọta ihe oyiyi Krita 4.1.0
Neofetch: nweta ozi gbasara akụrụngwa gị na sistemụ gị na ọnụ